ကျွ န်တော်တို့ နှင့်ပတ်သက်၍
ယခုဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသော ကြော်ငြာ များနှင့် ပတ်သက်၍
ယခုဝက်ဘ်ဆိုဒ်သည် ၃ဦးအပြန်အလှန်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ကြော်ငြာသည့် လုပ်ငန်းကိုဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် (Google Adsense). ကို အသုံးပြုထားပါသည်။ ကြော်ငြာထည့်သွင်းဖော်ပြလိုသူများသည် အသုံးပြု သူများ၏ ဝါသနာအလိုက် ကြော်ငြာရန်အတွက် Cookie（ကွတ်ကီး）ကို အသုံးပြု ခြင်းများလည်း ရှိပါသည်။Cookie（ကွတ်ကီး）ကို အသုံးပြု ၍ မရခြင်း မှာ အသုံးပြု သူ၏ browser နှင့် အလိုက် မတူညီမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ setting မချ မှီ မိမိအသုံးပြု နေသော browser ကို စစ်ဆေးပါ။
အသုံးပြု သူသည် ၊ ကြော်ငြာဆက်တင် ဖြင့် personalized ကြော်ငြာများကို မမြင်ရအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။（ဦးစွာပထမ ၊ www.aboutads.info တွင် access လုပ်ထားပါက ၊ personalized ကြော်ငြာတွင် အသုံးပြု နိုင်သော ၃ဦးအပြန်အလှန်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ကြော်ငြာသည့် Cookie ကို မမြင်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
第三者配信による広告掲載を無効မလုပ်ဆောင်ထားလျှင်၊ ကြော်ငြာဖြန့်ဖြူးသောအချိ န်တွင် third party ကြော်ငြာသူများနှင့် နက်ဝက်မှကြော်ငြာ၏ Cookie အား အသုံးပြု ရခြင်းများလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Access analysis နှင့်ပတ်သက်၍
ဤblogသည် Google နှင့် အလိုက် access analysis tool များ ဖြစ်သော “Google Analytics”ကို အသုံးပြု ထားပါသည်။ Google Analytics သည် traffic data များကို စုဆောင်းရန်အတွက် cookies ကို အသုံးပြု ထားပါသည်။ ထိုဒေတာများသည် အမည်ဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲ စုဆောင်းထားပါသည်။ တစ်ဦးတည်း သတ်မှတ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါ။Cookieကို အသုံးမပြုလျှင် ဒေတာစုဆောင်းခြင်းကို ငြင်းဆန်နိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုနေသော browser settings ကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ထိုစည်းမျ ဉ်း ဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ ဒီနေရာမှ ⇒Google analytics စည်းမျ ဉ်းကို အသုံးပြုထားပါသည်
AdSense ၊ Google Analytics privacy policies နှင့် သက်ဆိုင်သော အသေးစိတ် အချက်အလက်များသည် ဤနေရာတွင်ဖြစ်ပါသည်⇒GooglePolicy နှင့် စည်းမျ ဉ်း
ယခု ဆိုဒ်နှင့် သက်ဆိုင်သော comments များနှင် ပတ်သက်၍
ဤ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ စံချိ န် စွမ်းဆောင်မှု အဖြစ် အထောက်အပံ့ပေးသော စွမ်းဆောင်မှုမျိုးဖြင့် spamဖျက်စီးခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသောIP address ကို အသုံးမပြုခြင်းမရှိပါ။
ဤ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ စံချိ န် စွမ်းဆောင်မှု အဖြစ် အထောက်အပံ့ပေးသော စွမ်းဆောင်မှုမျိုးဖြင့် spamဖျက်စီးခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသောIP address ကို အသုံးမပြုခြင်းမရှိပါ။commentsအားလုံးသည် ပိုစ် မတင်ခင် administratorမှ စစ်ဆေးပြီး ဖြစ်ကြောင်းကို ထပ်မံ မှတ်သားထားပါသည်။
ဖြည့်စွက်၍ ၊ နောက်ထပ် contents list တွင် ပါဝင်သော Comments များသည် တာဝန်ရှိသူက ပေးသော အမိန့်ပေါ်မူတည်ပြီး ခွင့်ပြုချက် မရဘဲ ဖျက်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းများလည်း ရှိပါသည်။
သဘာဝလူသား ( သို့မဟုတ်) သတ်မှတ်ထားသောသူကို အသရေပျက်စေပြီး ၊ ကျစ်လစ်သွယ်လျှစေခြင်း။
တားမြစ်ထားသောထုတ်ကုန်များရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း ၊ အခြားသောသူများကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်သည့် အပြုအမူများကို တောင်းဆို၍လည်းကောင်း ၊ ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားသော ပစ္စည်းများ ၊ လှုပ်ရှားမှုများကို တောင်းဆိုခြင်းတို့အား ဖြန်ဖြေပေးခြင်း။
အခြားသော အမိန့်များကို ချိုးဖောက်ပြီး ထပ်မံ၍ တာဝန်ရှိသူ၏အမိန့်ကိုအသိအမှတ်မပြုခြင်း။
အခြားသော sitesများမှ မြှုပ်ထားသော content
ဤ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ ပိုစ်တွင် မြှုပ်ထားသော contentများတွင် (Videos, images, posts, စသည်တို့.)ပါဝင်ပါသည်။ အခြားသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှ မြှုပ်ထားသော contents များသည် သွားရောက် လေ့လာသူများက ထိုဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ အလည်လာခြင်းနှင့် တူသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြု မူဆောင်ရွက်သည်။
ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်သည် သင်၏ ဒေတာများကို Cookieကိုအသုံးပြု၍ စုဆောင်းခြင်း၊ third ပါတီအလိုက်ခြေရာခံပေါင်းထည့်ခြင်း၊ ပေါင်းထည့်မြှုပ်နှံထားသော contents များကို အပြန်အလှန် စောင့်ကြည့်ခြင်း စသောလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ အကောင့်ကို အသုံးပြု၍ ထို ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ log in အချိန်တွင် ပေါင်းထည့်မြှုပ်နှံထားသော contentများ အပြန်အလှန် tracking များလည်း ပါဝင်ပါသည်။
ဒေတာကို သိမ်းပေးထားနိုင်သည့် အချိန်ကာလ
သင်သည် ကွန်းမန့်ကို ချန်ထားခဲ့လျှင် ထိုကွန်းမန့်နှင့် meta data သည် အကန့်အသတ်မရှိ ထိန်းသိမ်းခံရပါမည်။ ဤသည်မှာ moderation queue တွင် ကွန်းမန့်ကို သိမ်းဆည်းမည့်အစား follow-up comments ကို အလိုအလျှောက် အသိအမှတ်ပြု ခွင့်ပြု ရန် ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ယခုဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော user ကရှိနေခဲ့လျှင် ထိုသူ၏ personal information များကို profile page တွင် ထိန်းသိမ်းထားပါမည်။ user အားလုံးသည် မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်များကို ပြသခြင်း၊ ပြု ပြင်ခြင်း ၊ ဖျက်ခြင်း များကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ (သို့သော် user name ကိုတော့ ပြောင်းလဲခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ပါ) Site administrators ကသာလျှင် သတင်းအချက်အလက်များကို ကြည့်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
လာရောက်လေ့လာ ကြည့်ရှုသူများ၏ ကွန်းမန့်များသည် အလိုအလျှောက် spam detection services စနစ် ဖြင့် စစ်ဆေးမှုများ လည်း ရှိပါသည်။
ယခုဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ အကောင့်ရှိလျှ င် သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ကွန်းမန့် တစ်ခုခု ချန်ထားခဲ့မည်ဆိုလျှင် ကျွ နုပ်တို့က သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများ (ပေးပို့ရန်လိုအပ်သော သတင်းများဒေတာများအပါအဝင်)ကို export file အနေဖြင့် လက်ခံပေးထားနိုင်ရန် request ပြု လုပ်ထားနိုင်ပါသည်။ထပ်မံ၍ personal data များ ဖျက်ရန်လည်း တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ထိုအထဲတွင် ထိန်သိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ၊ တရားဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သော security ဒေတာများ မပါဝင်ပါ။
ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသော သတင်းအချ က်အလက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေ အရှိဆုံး မှန်ကန်သော အချ က်အလက်များကိုသာ ဖော်ပြထားပါသည်။ သို့ပေမဲ့ လူတိုင်းအတွက် တော့ ကိုက်ညီမှု မရှိနိုင်ပါ။ ယခုဝက်ဘ်ဆိုဒ် ကို အသုံးပြု ၍ ပြဿနာ တစ်စုံတရာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါက တာဝန်မယူနိုင်ပါ။အထူးသတိပြု စေချ င်ပါသည်။
ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ စာသားများ၊ ပုံများသည် Skyhorse Job Japan ၏ဝက်ဘ်ဒ်ဆိုဒ်နှင့် အသီးသီးသောဖန်တီးသူများထံ မှ ကူးယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည် ခွင့်ပြု ချ က်မရပဲနှင့် အသုံးပြု ခွင့်မပြု ပါ။
ပထမဦးစွာထည့်သွင်းဖော်ပြသည့်ရက်：2020ခုနှစ် 7လပိုင်း 23ရက်